News 18 Nepal || चीनले नेपाललाई दिने भ्याक्सिन कुन हो ? कतिको छ प्रभावकारी ?
काठमाडौं । कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा सहयोगलाई बढाउँदै चीनले ८ लाख डोज कोभिड-१९ भ्याक्सिन नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि फेब्रुअरी ५ मा चिनियाँ विदेश मन्त्री स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपाललाई पाँच लाख डोज भ्याक्सिन सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगको टेलिफोन वार्तामा उनले यस्तो घोषणा गरेका थिए । आइतबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाललाई कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न चीन सरकारले भ्याक्सिन सहयोगलाई बृद्धि गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।
चीनले पहिले घोषणा गरेको पाँच लाखमा तीन लाख बढाउँदै ८ लाख डोज भ्याक्सिन सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी गराएकी हुन् । चीनले यसअघि कोभ्याक्स अन्तर्गत विकासशील राष्ट्रका लागि एक करोड डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपाल आउने भ्याक्सिन कुन हो ?
डब्लूएचओको सूचीमा रहेका १५ वटा विकास भइरहेका भ्याक्सिनमध्ये ६ वटा भ्याक्सिन चीनमा विकास भएका र अन्य चाहिँ तयार भइरहेका भ्याक्सिन हुन् । नेपालमा चीनले ८ लाख डोज सहयोगको घोषणा गरेको छ ।
नेपालमा हालसम्म दुई वटा भ्याक्सिनलाई मात्र आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइएको छ । जसमध्ये अस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विकास गरी भारतको सेरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादित कोभिसिल्ड पहिलो हो । जुन भ्याक्सिन नेपालमा २० लाख डोज आइसकेको छ । भने पहिलो चरणको खोप अभियान सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
त्यस्तै, अर्को भ्याक्सिन चीनमा उत्पादित भेरोसेल हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधी ब्यवस्था विभागले फेब्रुअरी १६ को विभागीय निर्णयबाट भेरोसेललाई आपतकालीन प्रयोजनका लागि अनुमति दिएको हो ।
कति प्रभावकारी छ भेरोसेल ?
भेरोसेलको तेस्रो चरणको ट्रायल विभिन्न देशमा जारी छ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा जुलाइ देखि भेरोसेलको क्लिनिकल ट्रायल सुरु भएको थियो । नेपालमा आपतकालीन प्रयोग अनुमति पाएको सिनोफार्मा अन्तर्गतको बीआईबीपीले विकास गरेको भेरोसेलको तेस्रो ट्रायलमा ८६ प्रतिशत प्रभावकारी भएको अन्तरिम विश्लेषणले देखाएको युएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।
यो भ्याक्सिनलाई पहिलो पटक सेप्टेम्बरमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको थियो । युएईले भ्याक्सिन एन्टिबडीलाई न्युट्रलाइज गर्ने सेरोकन्भर्जन दर ९९ प्रतिशत र कोभिड-१९ को गम्भीरतालाई रोकथाम गर्न शत प्रतिशत प्रभावकारी रहेको जनाएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, यसको प्रयोगमा कुनै गम्भीर स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिम नरहेको समेत जनाएको छ । युएईमा भएको क्लिनिकल ट्रायलयमा १२५ देशका ३१ हजार जना सहभागी भएका थिए । त्यस्तै, यो भ्याक्सिनको ट्रायल इजिप्ट, जोडर्न र बहराइनमा पनि जारी छ ।
मोरक्को र पेरुमा २०२० को अगस्टबाट क्लिनकल ट्रायल सुरु भएको थियो । सेप्टेम्बर १४ मा युएईले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । नोभेम्बरमा आइपुग्दा सिनोफार्मले १० लाख चिनियाँले भ्याक्सिन लिइसकेको घोषणा गरेको थियो ।
नोभेम्बर ३ मा दुबईका शासक शेख मोहम्म विन रसिद अल मक्तोमले भ्याक्सिन लिएको घोषणा गरेका थिए । डिसेम्बर ९ मा युएईले भ्याक्सिनलाई पूर्ण अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै डिसेम्बर १३ मा बहराइनले पनि यसलाई अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
डिसेम्बर ३० मा सिनोफार्मले भ्याक्सिन ७९.३४ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको घोषणा गरेको थियो भने जनवरी ३ मा इजिप्टले पनि यसको आपतकालीन प्रयोगलाई अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै, सिनो फार्मले पनि अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको दाबी गरेको छ ।